VPN: Kedu ihe ọ bụ na olee otu m ga - esi họrọ nke kachasị mma maka mkpa m? | Site na Linux
Ọtụtụ ndị na-eji Intanet eme ihe n’oge ụfọdụ, n’ihi ọtụtụ ihe, na-achọkarị ịnyagharịa na ọkwa dị elu nke «protección y privacidad», ma o si n’ulo, oru ma o bula ebe o bula. Maka nke a ha na-emekarị -eji nke «VPNs», nke bụ ihe ọ bụla karịa «Redes Virtuales Privadas». Nkebi ahịrịokwu na English, e dere «Virtual Private Network» ma debiri ya «VPN».
Ma nke a, kpomkwem ihe a «VPN» emepụta njikọ echekwara na netwọkụ ọha, bụrụ njikọ «WiFi» nke ụzọ njem ọhaneze, ụlọ dịka họtel, ebe igwu mmiri ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ma ọ bụ otu netwọkụ dịka ụlọ anyị ma ọ bụ ọrụ anyị. «Conexión segura» nke na-enye ohere ka okporo ụzọ data anyị gbasaa site na sava akọwapụtara nke ọma na «cifrado» nke otu, iji zoo ihe omume anyị na ịntanetị, na mgbakwunye na ịnye anyị «protección» chere ọtụtụ ihe egwu dị na weebụ ihu.
Ka anyị ghara ichefu na «VPNs» Ha na-abakarị uru n'ọtụtụ ụzọ. Nke ahụ bụ, ọ bụghị naanị nye «protección y privacidad», ma anyị ma maka ngwaọrụ anyị, ma ha nwekwara ike inyere anyị aka merie ihe ga-ekwe omume «restricciones o censuras» site na ụfọdụ ndị na-eweta ntanetị ma ọ bụ gọọmentịma ikwado anyị «acceso» site n’ebe ọ bụla gaa n’ Internetntanet dị iche iche enwere ike igbochi ala ndị nyere ha ma ọ bụ iwu obodo ha.
Na mgbakwunye, ụfọdụ ndị na-enye «VPNs» Ejiri nke ọma, ha na-enwekarị ndepụta nke sava dị iche iche «anchos de bandas» dị nke ahụ nwere ike inye ọkwa dị iche iche nke ahụmịhe onye ọrụ dịka mkpa ha chọrọ. Ihe kpatara ya, a na-ahụkarị ha taa n'ọtụtụ ebe; site na nnukwu ụlọ ọrụ ọha na eze na nke onwe ha n'ụlọ onye ọ bụla, iji nweta ohere dịpụrụ adịpụ na ntụkwasị obi na weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ akụrụngwa nkeonwe.
1 Kedu otu esi ahọrọ VPN kacha mma maka mkpa m?
1.1 Na-ahọrọ nke dabere na ntụkwasị obi na nghọta
1.2 Ekwela ka ihe mgbasa ozi na-eduhie gị rafuo gị
1.3 Nyochaa ọnọdụ ma ọ bụ ikike mpaghara gị
1.4 Zere ịhọrọ nke ndekọ ihe omume gị
Kedu otu esi ahọrọ VPN kacha mma maka mkpa m?
Ọ bụ ezie na ọ dighi onye ọ bula «VPN» zuru okè, ebe ọ bụ ha niile nwere ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ mmachi ma ọ bụ mgbochi, nke na-abụkarị ihe dị mkpa nye ndị dị iche iche, ihe bụ isi bụ ikike ya iji kwado anyị «protección y privacidad». Ya mere, nkwenye ma ọ bụ ihe ndị ị ga-atụle n'okpuru ga-abụ ihe nduzi dị mfe ma baa uru iji banye na akaụntụ.
Na-ahọrọ nke dabere na ntụkwasị obi na nghọta
Mgbe nile na-ebute ụzọ na Service nke «VPN» nke ahụ na-eme ka obi sie gị ike ịtụkwasị obi na na ọ gaghị emebi data gị, ọbụlagodi na ị ga-eji ọrụ ahụ maka okwu geo-unblocking dị mfe ma ọ bụ ndị ọzọ.
Ekwela ka ihe mgbasa ozi na-eduhie gị rafuo gị
Zere ịhọrọ nke gị «Proveedor de VPN» dabere na nchọta na nsonaazụ dị mfe enwetara na Intanet, nke ọtụtụ oge bụ naanị ngwaahịa ụdị ahịa akpọrọ «publicidad nativa» nke sitere na «programas de afiliados» na uru azụmaahịa, nke bụ mmegbu na nnukwu nsogbu n'ime mpaghara ndị na-eweta VPN.
Nyochaa ọnọdụ ma ọ bụ ikike mpaghara gị
Cheta na na-adịbeghị anya ọtụtụ mgbe nke «programas de vigilancia masiva» nke gọọmentị dị iche iche nke mba ụfọdụ gburugburu ụwa, yana nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọkwa zuru ụwa ọnụ. Ya mere, zere iji ọrụ nke ntọala ya dị na mba ndị a na-ekwu ma ọ bụ n'okpuru ndị gọọmentị kwuru ma ọ bụ soro na ndị otu ahụ na-etinye aka ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi, iji gbochie ha ịbụ ndị dị mfe «registros ilegales» na nkwa iwu emere maka nke «seguridad nacional» ma ọ bụ ọrụ azụmahịa nke mba ọzọ.
Zere ịhọrọ nke ndekọ ihe omume gị
Họrọ ọrụ nke kwuru hoo haa «que no mantienen registros», ma ọ bụ mezue nke ahụ, ụdị ụdị ndekọ anaghị edebe. Ọtụtụ ọrụ si «VPNs» Ha na-ekwu na ha agaghị edebe ihe ndekọ, mana ọ bụrụ na ha mere, biko gosi n'onwe gị usoro na amụma nzuzo nke ndị ahụ na-eweta ha.
N'ikpeazụ, na nchịkọta, buru isi ihe ndị a n'uche:
Kwụ ụgwọ ụzọ na chọrọ: Zere ndị na-enye ọrụ na-arịọ maka ọtụtụ njirimara njirimara dị nhịahụ.
Usoro ogbugba ndu: Na-ahọrọ ndị na-eji usoro nkwekọrịta n'efu na nke emeghe, yabụ ndị ọkachamara nchekwa ga-enyocha ma melite ya. Ndị dakọtara ma ọ bụ dabere na OpenVPN bụ ndị kachasị mma, yana PPTP opekata mpe maka nzuzo.
Nwee DNS na IPV6: Họrọ ọrụ VPN nke na-echekwa ihe nkesa IPV4 ma ọ bụ IPV6 DNS nke ya, ma nyekwa adreesị IPv6 kpọmkwem VPN nke enwere ike ịnweta naanị site na oghere VPN.
Nzuzo eji: Họrọ a Okwey Service na nwere data izo ya ezo na ike okwukwe aka. Gbaa mbọ hụ na usoro iwu enyere nwere ọkwa ezoro ezo dịnụ.
Choosehọrọ mma VPN enwere ọtụtụ weebụsaịtị dị, mana Anyị na-akwado ndị na-esonụ 2 weebụsaịtị, otu onye na Bekee nke ọzọ abata español na-eme ka ndị magburu onwe atụnyere na ọtụtụ n'ime ndị na enye nke «VPNs» dị ịhọrọ nke kacha dabaa na mkpa anyị.
Kedụ ka anyị nwere ike isi kwubie, las «VPNs» bara ezigbo uru, ebe ọ bụ na n'etiti ọtụtụ ihe zoo anyị okporo ụzọ ozi anya ka anyị «Proveedor de Servicios de Internet (Internet Service Provider - ISP)»; na-ahapụ naanị na echiche, na anyị nwere njikọ na a Sava «VPN», ọ dịghị ihe ọzọ. N'ụzọ dị otú ahụ na data anyị niile na-agagharị na ya site na njedebe ruo na njedebe, na-enweta «protección y privacidad».
Ka anyi ghara ichefu, na inweta uru bara uru mgbe ị na-eji a «VPN» surfs site na adreesị IP nke ọzọ karịa nke ISP anyị nyere, iji mee ka ezi njirimara anyị na safentanetị dị mma n'oge niile. N'ihi ya, ebe anyị na-aga amaghị na anyị okporo ụzọ na-abịa site na anyị n'ezie ebe, ma na ọ na-abịa masked si Sava «VPN».
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere VPNs, anyị na-akwado banye n'okwu banyere «Tunneling de las VPNs» na «Protocolos VPN» eji n'ime teknụzụ dị otú ahụ. Nke ikpeazu maka nke a, ọ dị mma mgbe niile iji ojiji, dịka ọ dị na mbụ, nke teknụzụ n'efu ma ọ bụ nke mepere emepe, yabụ gị anyị na-akwado iji «OpenVPN» ruo n'ókè o kwere mee, dị ka nkà na ụzụ na / ma ọ bụ ọrụ dị otú ahụ na-enye nguzozi kachasị mma n'etiti ọsọ na nchekwa.
Ọ bụrụ na akwụkwọ a masịrị gị, gwa anyị ọrụ ọ bụla «VPN» ị na-eji ma ọ bụ kwadoro na gịnị kpatara ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » VPN: Kedu ihe ọ bụ na olee otu m ga - esi họrọ nke kachasị mma maka mkpa m?
LibreOffice 6.2 dị njikere ugbu a maka iji azụmahịa